Amerikaan Kanneen Wareegamaniif Yaadataa Jirti
Pirezdaantiin Yunaaytid Isteets Joo Baayden abaaboo kabajaa bakka siidaa awwaalaa loltootaa yeroo olkaahan, Varjiiniyaa, Caamsaa 30, 2022
Yunaaytis Isteetes keessatti baatii caamsaa keessatti wiixatnii inni dhumaa guyyaa yaadannoo dhiiraa fi dubartoota waraana biyyatti ta’uun ituu tajaajiilanii weereegamantu ta’uun yaadatama.
Ayyaannii yaadannoo inni baranaa Caamsaa 30 Irra kan oolee sadarkaa mootummaatti kan kabajamuu yoo ta’u gabaan daldala maallaqaas cufamee prezidaantiin Amerikaa Joo Baaydiin, awwaala gootoota Amerikaa kan biyooleessaa isa Arliingtan jiru keessatti sirna yaadannoo gaggeeffamu irratti argamuuf jira.
Bakka awwaala lotloota Ameerikaa waraana irratti wareegamanii, Liivwoorzi jedhamu, Caamsaa, 29, 2022, Kaansas
Ayyaana kana sabaeeffachuudhaan hiriirrii magaala Waashiingtan keessatti kan gaggeeffamu yoo ta’u lammiwwan Amerikaa hedduun lafa awwaala gotootaa wareegamanii daawwachuun akkasumas iliillii ykn Abaaboo awwaala isaanii irr ka’uun yaadatu.
Guyyaa akka har’a kanatti kanneen gurmuun ta’anii biskileeta motaraa ykn doqdoqqee ofuun yaadachuun akka adaa tti ilaalama.Barana garuu gadamoojjilee waraanaa kanneen ofii isaanii of ajjeesan kan ilaaleen waan hojjatamuu qabu irrattis fuleeffatan.
Maatii hedduunis akka maatitti waliitti qabamuun baatiin bonaa seenuu isaa simatu.